Abanye abafundi baya kufumana isicatshulwa sokuqala esiye samkelwa
"Incwadi ebonakalayo" isixhobo esetyenziswe iikholeji ezikhethiweyo kunye neeyunivesithi. Ikwazisa iiphambili ezikhethiweyo zezikolo kwisiphakamiso sofake isicelo rhoqo ukuba incwadi yokuwamkela iyakuthi izayo kwikamva. Iileta zinika iikholeji indlela yokuqala ukufumana abafake izicelo eziphezulu ngaphandle kokulinda deza izaziso zesigqibo esisisigxina esingaze siphume sithuba seMatshi okanye ekuqaleni kuka-Apreli.
Kutheni iikholeji neeyunivesithi zithumela iiNcwadi ezifanelekileyo?
Ukuba inkqubo yokungeniswa kweekholeji ibonakala ikhetha ngokukhawuleza kwaye ikhuphisana, uchanekile ngokuqinisekileyo ukuba usebenzisa izicelo zeekholeji zee- klebhu ezikhethiweyo . Kodwa kukho elinye icala kumncintiswano. Ngokuqinisekileyo, abafundi abaninzi banokukhuphisana nabanye ukuba bafumane iindawo ezincinci ezikolweni eziphambili, kodwa ezo zikolo eziphezulu zikhuphisana kunye nokufumana abafundi abanamandla kunabo bonke abanamakhono. Faka ifowuni enokwenzeka.
Ngokuqhelekileyo, izikolo ezikhethiweyo zesizwe azikhethi zivunyelwe . Abaninzi bayakwazisa yonke indawo yabo yokufaka izicelo zokubamkela ekuhambeni kweyoKwindla okanye ekuqaleni kuka-Apreli. Oku kuthetha ukuba iinyanga ezintathu zisoloko zihamba phakathi kwesicelo sokugqibela kunye nokukhutshwa kwezigqibo. Lezi zinyanga ezintathu apho ezinye iikholeji zingaba ziqeshwe ngokunyanisekileyo kwaye zikhuphe abafundi. Ukuba umfundi usebenza ekuqaleni kwenkqubo yokuvakalisa - ngo-Oktobha, umzekelo-iinyanga ezintlanu ziya kuhamba phakathi komfundi ukuthumela eso sicelo kunye nokufumana ileta yokwamkela.
Lezi zinyanga ezintlanu apho ixhala lomfundi esikolweni liyancipha, ingakumbi ukuba unyanzeliswa ngokunyanisekileyo nokufundiswa kwesinye isikolo.
Ngamafutshane, ukuba iikholeji ifuna ukufumana isivuno esinamandla kwi-pool yabo yesicelo esiphakamileyo, baya kusebenzisa iileta eziqhelekileyo.
Mhlawumbi iileta zibavumela ukuba bathethe nabafundi abaphezulu, banciphise ixesha lokulinda labafundi, bandise abafundi bavuyiswe, kwaye benze kube lula ukuba abo bafundi bafunde.
Andizange Ndifumane I-Letter Inokwenzeka. Yintoni ngoku?
Musa ukukwesaba - uninzi lwabafaki zicelo kwiikholeji liyavuma ukuba ayifumana iileta ezinokwenzeka. Ngokomzekelo, ngo-2015 iYunivesithi yaseHarvard yathumela iileta ezingama-300. Ngama-200 walezo zihlandlo zaya kubagijimi (mhlawumbi iileta zixhobo ezibalulekileyo ezikolweni ukufumana abo bafundi abaqhathaniswayo abagqwesileyo kokubili kwimfundo nakwiimidlalo. IYunivesithi yasePennsylvania yathumela iileta ezingama-400 ngonyaka ka-2015. Ngenkcazelo encinci yamatriki, okubonisa ukuba malunga nabafundi abathandathu abavakalisiweyo kwi-pool yefakeli yesicelo bafumene incwadi. Ngoko ukuba ufumene itekisi enobungqina, vuyisana! Isikolo sikubonayo njengomfaki-sicelo ofanelekileyo kwaye ufuna ukuba ube khona. Ukuba awuzange ufumane enye? Wena uninzi. Usenokude udidekile ngokungafumani incwadi, kodwa ngokuqinisekileyo umdlalo awupheli.
Yintoni Incwadi Ebonakalayo Ngokwemvelo?
Isikolo ngasinye siza kubhala amagama abo ngokungafaniyo, kodwa bavame ukunyanzela umenzi wesicelo kwaye baxhamle ekufikeni kweleta yokuwamkela kwixesha elizayo.
Ngokubanzi, unokulindela into enjengale: "Ukubulisa kwi-Ofisi ye-Admissions kwi-Yunivesithi yase-Ivy ndikubhalela ukuba ndikuxelele indlela abazalwana bam kunye nabazalwana bam banomdla kunye nezinto ezininzi ezifezekileyo ngaphakathi nangaphandle kweklasi. uvakalelwa kukuba iitalente zakho kunye neenjongo zakho zihambelana kakhulu neYunivesithi yase-Ivy. Nangona singayithumeli izikhundla ezisemthethweni zokwamkelwa kude kube ngowama-30 Matshi, sasicinga ukuba ungathanda ukwazi ukuba unako ukuvunyelwa.
Ngaba Ingeniso yokuVunywa kweeNcwadi eziNokwenzeka?
Nangona i-letter mhlawumbi ayiqinisekisi ukuba uya kufumana i-letters yokuwamkela, isondele kakhulu kwisiqinisekiso. Gcina amanqaku akho phezulu, ungafaki ukumiswa okanye ubanjwe, kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana iindaba ezilungileyo ezivela kwikholeji ekuthumele incwadi. Ileta ngokwayo ayiyi kubakholwa ukuqinisekiswa kwamkelwa ngenxa yokuba iya kuba yincwadi yokwamkelwa, kwaye ukuthumela iincwadi zokuwamkelwa phambi kwosuku lokusazisa olusemthethweni luya kuphula imithetho ye-yesikolo.
Kodwa ewe, unako ukubala ukuba ungene.
Qaphela ukuba nokwamkeleka ngokusemthethweni kungagxothwa xa amabakala akho ehla kakhulu, okanye wenza into yokuba ungene enkingeni.
Iikholeji Zithumela Ziziphi Iincwadi?
NgoFebhuwari yithuba eliqhelekileyo lokufumana iincwadi ezibonakalayo, kodwa ziza kuqala okanye kamva. Ukuba usebenzisa isicelo sokuqala kokuwa, izikolo ezimbalwa ziza kubathumela iincwadi phambi kokuba unyaka omtsha. Oku kuyinyaniso ukuba umqeshi wezemidlalo usebenza ngokubambisana kunye nabamkelwayo ukuya kumfundi.
Ziziphi iZikolo ezithumela iincwadi?
Iikholeji ezininzi azivakalisi ngokucacileyo iinkqubo zabo ezinobungqina obujikelezayo, ngoko kunzima ukwazi ukuba zininzi izikolo ezisetyenziswayo. Oko kwathiwa, iYunivithi yaseHarard, iYunivesithi yaseYale , iYunivesithi yasePennsylvania kunye nayo yonke i- Ivy League Schools isebenzisa uhlobo oluthile lweencwadi. Uninzi lweeyunivesithi eziphambili zelizwe kunye neikholeji zobugcisa obuphezulu kakhulu zisebenzisa kwakhona iileta ezinokwenzeka.
Iikholeji ezininzi ziye zamkelwa, ngakho ke abanasidingo sokwenza iileta. Baya kuthi bathumele iileta zokwamkela ngokukhawuleza xa bathetha isigqibo somfundi umdlalo omhle wesikolo.
Iikholeji ezininzi nakwiiyunivesithi eziqhelekileyo zisebenzisa iileta ezinokwenzeka kunamacandelo karhulumente, kodwa ezimbalwa zeeyunivesithi zikarhulumente ezikhethiweyo ezifana neYunivesithi yaseVirginia zizisebenzisa.
I-7 eyona edume kakhulu kwi-Anime Series yiyo wonke umntu ukhangele
Umdwebi okanye uMculi?
D Major Scale kwiBass
Indlela yokuphatha i-Catfish Sting
Iiklinikhi zokuNyuka kweRhafu yeNgeniso yeNgeniso
Liliphi Iinyawo Okufuneka Libe Ngaphambili Kwi-Slalom Waterskiing okanye i-Wakeboarding?
Indlela yokulungisa i-Carburetor ye-Motorcycle
IziCatshulwa zeSikolo seNkcazo zeSikolo
Imigaqo yeMimoya yeSpain
Indlela Yokuthandaza IRosari
I-Spinning Mule Invention nguSamuel Crompton
20 Ukubhaliweyo Kwimiyalezo Ehlulekayo Ukubonisa Abazali Akufanele Kubhalwe phantsi
I-Surefire Bestsellers ezayo ngo-2017